Guddida Diiwaan-gelinta Ururada Siyaasada oo Ansixiyay Shirka Garabka Faysal Cali Waraabe |
Guddida Diiwaan-gelinta Ururada Siyaasada oo Ansixiyay Shirka Garabka Faysal Cali Waraabe
Hargeysa (GNN)- Xisbiga mucaaridka ah ee UCID ayaa shir-weyne aan caadi ahayn oo muddo laba maalmood ah uga socday magaalada Hargeysa waxay markii saddexaad murrashaxa jagada madaxweynaha u doorteen guddoomiyaha xisbigaasi Fayal Cali Waraabe.
Maxamed Xasan Shabaash oo guddoominayey shirweynahaasi aan caadiga ahayn ee xisbiga UCID ayaa ku dhawaaqay in Faysal Cali Waraabe uu ku guulaystay tartanka jagada murrashaxa madaxweynaha ee xisbiga gudihiisa, iyada oo jagadaasi uu kula tartamay Mr. Maxamed Jaamac Cabdi.
Maxamed Xasan, waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaabkii uu dhacay shirkaasi aan caadiga ahayn, tirada ergooyinka ka qayb galay iyo jawigii shirka, waxa uu yidhi “Shirka waxa fadhiyey133 xubnood, waxaana Eng. Faysal Cali waraabe u doortay inuu noqdo murrashaxa madaxweyne ee xisbiga 94 xubnood, halka Maxamed Jaamac helay codad dhan 39, laga bilaabo haddana murrashaxa madaxweyne ee xisbiga UCID waa Eng. Faysal Cali waraabe.”
Xisbiga UCID ayaa shirweynahaa aan caadi ahayn oo ay hore Maxkamada sare u go’aamisay, waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada, Hargeysa, waxaana doorashadii Murrashaxa madaxweynaha ka dib, khudbad dhinacyo badan leh ka jeediyay Guddoomiyaha xisbigaasi Eng. Faysal Cali Waraabe.
“Walaalayaal waxaan idiinku bushaaraynayaa in Guddigii Diiwaan-gelinta ururrada oo hadashay, caddeeyeen in shirweynahii aan caadiga ahayn ee xisbigu qabsaday ahaa mid sharci ah, xalaalna ahaa, halkaana waxa ku dhammaaday khilaafkii iyo aflagaadadii xisbiga UCID loo geysan jiray. Walaalayaal ujeeddadii aan Somaliland u imi waxay ahayd sidaan u dhisi lahaa ummada, inkasta oo dhibaato badan iga soo gaadhay, haddana waan u dul qaatay, waxaan dembi lahaana Cali Guray oo beryahaa iga sheekaynayey ayaa la wareegay, Alxamdu-lilaah,”ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Faysal Cali, waxa uu sheegay inaanu jirin shaqo la’aan dalkeenna ka jirta, balse ay jiro aqoon la’aan, waxaanu yidhi, “Dalkeenna shaqo la’aani kama jirto, laakiin dadkeenu aqoonteedii ayaanay lahayn, waana sababta keentay in Hindi iyo ajaanib ka shaqeystaan, waxaanu dhisi doonaa dugsiyada farsamada, si loo helo jiil xirfado lagu shaqeysto leh.”
Guddoomiyuhu waxa kale oo uu ka hadlay cuqaasha iyo salaadiinta ku dhexmilay siyaasadaha, waxaanu ballanqaaday innay joojin doonaan, hadii ay ku guulaystaan hogaanka dalka, waxaanu yidhi, “Walaalayaal, dhinaca qabyaalada, xisbiga UCID wuu joojin doonaa in cuqaasha iyo salaadiintu dib ugu dhexmilmaan siyaasadaha, shaqooyinkooda dhaqanka ayey qabsan doonaan, ma jiri doonto qabyaalad dambe oo idaacadaha iyo telefishanada lagaga hadlo, walaa Subeeriya, walaa Garxajisiya dambe ma jiri doonaan, walaahi waanu joojin doonaa, hadii Ilaah yidhaahdo.
Sharciga islaamka ayey ku socon doonaa, ka naxow nafta waa, wax bani’aadam sameeyey inaynu qaadano maaha.”
Eng. Faysal ayaa shaaca ka qaaday hadii xisbiga UCID doorashada ku guulaysto inaanu jiri doonin mucaarad dambe, saddexda xisbina uu ka qeybgelin doono xukuumada ay samayn doonaan.
Mar uu ka hadlayey maalgashiga dekeda Berbera iyo shirkada DP World, waxuu yidhi, Gudoomiye Faysal, “Maanta dalkeena waxa u soo badheedhay oo maalgashi gelinaysa shirkada DP World, waxa muhiim ah inaynu soo dhoweyno, oo keliya aynaan quudin Itoobiya ee ilaa Koonfurta Sudan gaadhsiino inay ganacsigooda kala soo degaan, yaan laga hortegin waxii horumar ah.”
Gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa sheegay inuu ka badbaaday shirqool la doonayey in Cabdiraxmaan Cirro loo sadqeeyo, isagoo arrintaa ka hadlayay wuxuu yidhi, “Walaalayaal, waxa la damcay in Cabdiraxmaan Cirro lay sadqeeyo, laakiin waan ka weynahay nin la sadqeeyo. Cabdiraxmaan annigaa soo gacan qabtay, oo dalka keenay, in la yidhaahdo garxajis baynu nahay Faysal aynu xerayno oo ciyaal ka daba qeylisiino, suurto-geli mayso.”
Dhinaca kale, guddiga diiwaan-gelinta ururrada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka Somaliland, ayaa sheegay in uu sharci yahay shirka aan caadiga ahayn ee uu qabsaday xisbiga UCID, isla markaana uu waafaqsanyahay go’aankii ay maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii u dhexeeyay labadda garab ee xisbigaas.
Guddida diwaangelinta ururradu sidoo kale waxay sharci darro ku tilmaameen shirkii uu qabsaday garabka uu hogaminayay Jamaal Cali Xuseen, kaasi oo ay sheegeen in uu ahaa mid ka soo hor jeeday go’aankii ay maxkamadda sare ka gaadhay xalintii khilaafkii xisbigaasi.
Guddiga diiwaan-gelinta waxay sidaasi ku sheegeen shir jaraa’id oo ay shalay ku qabteen xaruntoodda magaaladda Hargaysa, waxaanay sheegeen in shirkii aan caadiga ahayn ee ay qabsadeen garabka guddoomiyaha xisbiga UCID uu ahaa mid sharci ah ilsa markaana waafaqsan go’aankii maxkamada.
Af-hayeenka guddiga diiwaangelinta ururadda Xasan Axmed Ducaale (Xasan-mcalin), oo halkaasi ka hadlay ayaa faah-faahin ka bixiyay sababaha sharci ee ay u cuskadeen shirarka ay qabsadeen labada garab ee xisbiga UCID, isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi “Go’aankii maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii xisbiga UCID, cid wax ka badali kartaa ma jirto siday tahay ayuun baa loo qaadanayaa, waxaana maxkamadda sare go’aamisay in xisbiga UCID shir wayne aan caadi ahayn qabsado, shirkaa qabashadiisana waxay maxkamadu awood u siisay hogaanka xisbigu in uu shirkaa maamulo oo ay awood u siisay, kaa uu hogaanku qabtay ayuun baana sharci ah.”
Xasan Macalin waxa kale oo uu intaasi ku daray “ Laba shir-na ma jiraan ee hal shir ayay maxkamadda sare go’aamisay, waana xubno uu Faysal Cali Waraabe guddoomiye u yahay oo guddoomiye ku xigeenadu ka mid yihiin oo xoghayaha guud ee xisbigu ka mid yahay ,waxaana ay go’aamisay maxkamadu in labada garab ee xisbiga UCID mid shan xubnood soo magacaabaan oo hogaanku mar jac u yahay. Hogaanku-na wuu bedeli karaa wixii ay gaadheen gudidaa qaban qaabadu.”
Guddoomiyaha guddida diwaangelinta ururada siyaasada iyo ansixinta axsaabta qaranka Cabdirisaaq Jaamac Cumar (Cabdirisaaq Ciyaale), ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, waxaanu tilmaamay in ka guddi ahaan ay waafaqsan yihiin qaraarkii maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii labada garab ee xisbiga UCID.
“Waxa jirtay in labada garab ee xisbiga UCID ay ku kala baaqeen laba shir, labadaa shir ayaanan joojinaynay haddii aanu nahay guddida diiwaan-gelinta ururrada siyaasada iyo ansixinta axsaabta qaranka, waxaana aanu ilaalinaynay qaraarkii maxkamadda sare ee ahaa in min shan xubnood ay iska soo magacaabaan labada garab ee xisbiga UCID, garabka Faysal Cali Waraabe wuu u hogaansamay in uu shirkii joojiyo, garabka Jamaal Cali Xuseen way joojiyeen shirkii ay ku baaqeen oo way u hogaansameen go’aankii aaanu soo saarnay,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Faysal Cali Waraabe laba jeer oo hore ayuu u tartamayay madaxweynenimo, hase yeeshee wuu ku guul darraystay doorashooyinkii dalka ka kala qabsoomay sannadihii 2003-dii iyo 2010-kii, imikana waxa uu xilkaas u baratayaa markii saddexaad isagoo noqonaya murrashaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID uga qaybgalaya doorashadda madaxtooyadda ee loo muddeeyay inay wadanka ka dhacdo 28-ka Bisha March 2017-ka.